Doogee X95, ekwentị mkpanaka ọhụrụ nke na-erughị euro 60 | Gam akporosis
A ọhụrụ ala-arụmọrụ ama kemgbe emere site n'aka Doogee, ma obu X95 ohuru, ọnụ na elele anya mbụ na - enwe ike ịmegharị n'ụzọ dị mfe n'etiti etiti na ọbụna ụdị dị elu.
Ihe kachasị adọrọ mmasị banyere ngwaọrụ a, ma e wezụga ngosipụta mara mma, nke mara ezigbo mma ya price, nke bụ n'okpuru 60 euro. O nwekwara ihe omuma mara mma na nkowa ya; Anyị ga-ekwu maka ihe a niile n'okpuru.
Doogee X95 bụ aha nke nnukwu igwe akụ na ụba ọhụrụ
Ihe ohuru Doogee X95 biara na agba agba ato, nke di oji, ndu ndu, na acha anụnụ anụnụ. Ọ nwere nnukwu ihuenyo IPS LCD 6.52 nke anụ ọhịa Ọ na-ewepụta usoro atụmatụ 19: 9, na-arụpụta mkpebi HD +, ma na-etu ọnụ nke kachasị nits 600. Nke a Corning Gorilla Glass na-echekwa nke a ma nwee ọkwa n'ụdị mmiri mmiri.
Ọnụ ego ya, nke bụ 59.99 dollar (~ 56 euro ma ọ bụ 50 pound sterling) na-echekwa dị ka AliExpress, Gearbest na ukara ika, ọ bụghị ihe mgbochi maka nnukwu batrị ikike 4,350 mAh ka a nọrọ n'okpuru mkpuchi nke a obere-elu ma kwado 10W ngwa ngwa na-ebu teknụzụ.
El Chipset MediaTek MT6737, nke nwere 53 GHz quad-core Cortex-A1.3 CPU ma ọ bụ nke na-akwado ike nke ekwentị, jikọtara ya na 2 GB RAM na ebe nchekwa dị n'ime nke 32 GB nwere ike ịgbasa site na microSD. A ngwakọ SIM na microSD kaadị oghere dịkwa, dị ka gam akporo 10 OS-abịa tupu ebu si ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Enweghị onye na-agụ akara mkpịsị aka nkịtị, mana njirimara ihu adịghị ahụ anya site na enweghị ya.
Banyere igwefoto, enwere oghere okpukpu atọ nke 13 MP (isi) + 2 MP (omimi nke mmetụta ubi) + 2 MP (telephoto na 2X mbugharị) nke dị n'azụ na onye na-agba egbe 5 MP nke dị na ihuenyo notch.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Doogee X95 bụ ihe ọhụrụ dị ala nke emepere emepe nwere atụmatụ adịchaghị yana ọnụ ahịa nke erughị euro 60